Anọ m na-enyere ụlọ ọrụ aka ihe karịrị afọ iri site na usoro azụmaahịa ọdịnaya ha. N'elu bu vidiyo anyi jiri nyere ndi ahia anyi aka ighota otu anyi si eji ahia ahia eme ka anyi gha achu ahia site na iji saiti, ahia acho ahia, mgbasa ozi mgbasa ozi na mgbasa ozi intaneti.
Ọtụtụ azụmahịa na-emegharị ahịa ọdịnaya dị ka mgbasa ozi. Ha aghọtaghị ihe kpatara tweet, mmelite ọkwa ma ọ bụ post blọọgụ anaghị achụgharị mgbanwe. Ọdịnaya ọdịnaya abụghị ozugbo, ire ahịa ọdịnaya bụ atụmatụ chọrọ ka ọkụ na ntuziaka ka ị nwee ike iduzi ndị na-ege ntị site nzụta, ijigide ma ọ bụ ịkwalite usoro. Dị ka chumming bụ ịkụ azụ, ọtụtụ mgbe ị ga-enwerịrị usoro ntọala nke ọdịnaya iji kwalite n'ofe nri iji dọta ndị na-ege gị ntị.
Ndị folks na QuickSprout dere ọmarịcha ọkwa na ụdị nke ire ahịa ọdịnaya na mgbe iji ha. Anyị agaghị abanye n'ụdị ọ bụla, mana ọ ga-amasị m ilekwasị anya na isi ọdịnaya 6 bụ ndị anyị hụrụla kachasị mma maka ndị ahịa anyị n'ịrụpụta ha nwere mgbasa ozi akụrụngwa:
Isiokwu - ewu a kediegwu Ọbá akwụkwọ ọdịnaya nwere isiokwu dị nkenke dị oke elu nke na-aza ajụjụ maka atụmanya, ndị ahịa ma na-enye echiche ndu n'ime ụlọ ọrụ bụ ntọala nke ọ bụla ụlọ ọrụ. Ndị ụlọ ọrụ dị iche iche na-ele blọọgụ anya dịka atụmatụ otu oge, mana ọ bụ n'ezie ntinye ego na-emewanye ma na-emewanye atụmatụ mmasị. Enwere ike ịchọta ma kpọtụrụ aha ntanetị ọ bụla kwa ụbọchị iji bulie ikike ị nwere ịdọrọ, ijide ma gbaghaa ndị ahịa. De blọgụ maka azụmahịa na-enye nri maka ọchụchọ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya ịrụ ọrụ ma dị oke mkpa na nzukọ ọ bụla.
Infographics - imepụta ihe omuma ihe omuma nke emeputara nke oma, na-akowa ya nke oma, ma nye kwa usoro enwere ike ihu ma kesaa n'ofe otutu ngwaọrụ na teknụzụ abụrụla uru dị ịtụnanya nye nzukọ ọ bụla anyị rụtụrụla. DK New Media na-aga n'ihu ịbụ onye ndu na atụmatụ a, nyochara, mepụta, hazie, kesaa ma bulie ihe karịrị otu narị infographics. Nakwa, anyị na-enye ndị ahịa anyị faịlụ ndị bụ isi ka e wee weghachite eserese ahụ na nkwupụta ndị ọzọ na ahịa.
Videos - A kwesiri inwe maka atụmatụ ọdịnaya nke nzukọ ọ bụla bụ vidiyo. Y’oburu na ihe onyonyo kwuru otu puku okwu, vidiyo nwere ike inye njikọ nke mmetụta uche karịrị atụmatụ ọ bụla. Echiche ndị ndu, ndụmọdụ, vidiyo na-akọwa, vidiyo akaebe… ha niile na-agwa ndị na-ege gị ntị okwu nke ọma ma na-achọwanye kwa ụbọchị. Ghara ikwu na ndị mmadụ na-achọkarị vidiyo karịa ihe ọ bụla ọzọ!
email - ịghaghachite ozi gị na onye debanyere aha nwere otu n'ime nloghachi kachasị elu nke usoro ahịa ọdịnaya ọ bụla. Site na mgbe nile izipu atụmanya gị na ndị ahịa gị, ozi gị na-enye ma uru ma na-echetara gị na ị nọ ebe ahụ mgbe ha chọrọ gị. All ndị a ọzọ azum nwere ike ụgbọala ndị gị ika na-adịghị njikere ka a zụọ… nke ahụ bụ mgbe ị chọrọ iji hụ na ha debanyere gị email. Usoro ọ bụla nke ọdịnaya ga-enwerịrị usoro ịre ahịa email iji zụlite ma chụpụ ndị debanyere aha na ntụgharị.
E gosipụtara ọdịnaya ma rụọ ọrụ nke ọma ka ọ bụrụ na enwere ike ịkekọrịta ya na mgbasa ozi mmekọrịta? Nkọwapụta nke ị ga - enweta site na mgbasa ozi mgbasa ozi nwere ike ime ka ọbịbịa gị, mgbanwe yana ntinye usoro nyocha gị.